3% Kuvhura Vagadziri & Vatengesi - China 3% Kuvhura Fekitori
Roller Shade Mucheka
Kusarudza imba yevana inopofumadza, kwete chete yekufunga nezvekunaka kweketeni pachayo, asiwo kubatanidza imba yese dhizaini kuti ienzane.
Semuenzaniso ruvara rwemaketeni, ruvara rwemaketeni runofanira kunge rwakaenzana neyemukati kara system yekuchengetedza iyo yakazara runako rwemukamuri, uye zvakare kudzivirira iyo pfungwa yekusagadzikana.
Yakagadziriswa Hupamhi China Windows Kushongedza Maketeni Ekufukidza Shading Shutter inopofumadza Mucheka
Sarudza Yakagadziriswa upamhi inopofumadza machira nezvikonzero zvakawanda
Kurumidza kutsanya: Mune iyo yakareba-yezuva yezuva nharaunda, iko kutsanya kwemavara kwekushongedza kwewindo kunopofumadza jira rinoda mamwe matanho ekudzivirira hwindo keteni jira kubva pakupera. Uye zvakare, yekunze shading shutter zvigadzirwa zvinofanirwawo kunge zviine yega-yekuchenesa basa.
Tensile simba: Kune zvigadzirwa zvine pachena kushushikana kana tensile zvinodiwa, iyo tensile simba rehwindo rekuvhara machira jira rinofanirwa kutariswa.
Solar Screen Chinyorwa Chinotenderedza Shades Simba Roller inopofumadza Mucheka
Hwindo Bofu Mucheka
Kana zvasvika kune zvigadzirwa zvezuva, vanhu vanotanga kufunga mafomu ekunyorera akasiyana siyana akaomarara mune zvigadzirwa zvezuva. Asi kubva kune yekuvandudza nhoroondo yezvinhu zvakavharidzirwa nezuva, jira rakadzivirirwa nerudzi imhando yemachira ine kukura kwenguva refu. Kubva pakuona kwepasirese, sunshade machira tekinoroji iri kuramba ichiwedzera kukura.
Flame Retardant Inodzivirira Zuva Solar Cell inopofumadza Screen inopofumadza Mucheka
Roller inopofumadza Mitengo
Sekureva kwezita iri, machira evinyl ezuva epolyester machira ezuva ndiwo machira anogona kuvharira kupenya kwezuva uye kusefa zuva, machira ezuva anodzivirira zuva anogona kuita kuti imba iwedzere kupenya, kupfava uye zvakasikwa. imba yakanyarara uye ine runyararo kuti vanhu vasunungure. izvo zvakajairika zvezuva rezuva maseru ezuva ezuva machira epolyester nePVC machira ekugadzira, kuvhurika kwejira reshizha rezuva rakasiyana, masosi kubva ku1% kusvika 10% izvo zvinoita kuti zviitike kuti mangani muzana ezvekunze maonero anogona kuonekwa kubva mukati uye panguva imwechete , iyo yekuona mukati haigone kuve muhomwe kana ichiona kubva kunze kwechivako, iyo inonzi imwe nzira vhezheni. Micheka yakasviba yechidzitiro inowanzo kuve moto-unodzora uye machira anodzora murazvo, akasiyana marimi-anodzora mamakisi, zviyereso, ukobvu, nezvimwe zvinotungamira kumusiyano wemitengo yemachira ezuva.
Yemukati Sunshade Antistatic Guruva Ratidzo Solar Dziviriro Screen Machira
Solar sero jira kuvhurika
Kuvhurika kweshinda yezuva inodzivirira zvinoreva mwero wemaburi madiki akapindirwa newell uye weft yemumvuri wejira, uchishandisa tambo dzevara rimwe chete uye dhayamita kuruka iwo iwo maitiro, kugona kuvhara kupisa kwezuva kupisa uye kudzora kupenya nediki diki yekuzarura yakasimba pane iyoyo ine chiyero chikuru chekuzarura.
Mafashoni mafashoni ari kuramba achichinja, uye akasimba mavara agara achishingairira mufashoni denderedzwa nekuda kwavo akapfupika, asi kwete anofinha maficha. Iyo yakasimba color inopofumadza yakapusa uye yemuchadenga, iyo ichawedzera pakarepo pfungwa yehunhu kune yako imba hunhu. Ngatitenderei Groupeve kukuratidzei yakasimba color hwindo mechi machisi!
1. Yakabatana toni yakazara
Muchokwadi, zviri nyore kuenzanisa machira ane akasimba mavara. Kana iwe uri newbie, iwe unogona kuzvifunga. Paunenge uchisarudza maketeni akasimba, iwe ungangoda kuyedza kubatanidza nezwi rakazara. Kunyangwe mhedzisiro yehurukuro isiri yakasimba, iri nyore uye ine rupo.